Onye nlekọta ntụrụndụ, ọzụzụ na egwuregwu n'egwuregwu oge ụfọdụ
Ị na-eme ha egwuregwu
Nanị ọzụzụ a metụtara egwuregwu na BSO (ụlọ akwụkwọ sekọndrị).
Enweghi egwuregwu kacha elu, mana egwu egwu
Dị ka onye nchịkwa egwuregwu ị ga-enyere onye nkụzi ma ọ bụ onye nkuzi aka iso ndị na-eme egwuregwu ntụrụndụ. Ị na-enye nkwado nkwado ma nyere aka hụ na nchekwa na ọdịmma nke onye na-eme egwuregwu. Dị ka onye nchịkwa egwuregwu ị na - arụ ọrụ na - enweghị onwe gị, n'enweghị ihe ọ bụla ma na - eme egwuregwu. Ị na-arụ ọrụ n'okpuru nlezianya ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi ma dịka ntụziaka nke onye ọrụ ahụ.
Ị ga-enwe ike imeri ndị mmadụ na karịsịa ụmụ na ndị na-eto eto. Ị na-arụ ọrụ na gburugburu egwuregwu ebe ọ dị mkpa ka gị onwe gị kwadoro ma na-eme egwuregwu. A nabatara ndị na-eme egwuregwu na ndị ntụrụndụ kacha elu na ọzụzụ. Ihe e mesiri ike bụ iduzi ndị ọzọ ma ọ bụghị n'egwuregwu. Anyị na-ahụ na ị ga-ama egwuregwu niile ị nwere ịkụziri ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụrụndụ nwere ọtụtụ ihe eji egwu egwuregwu na mpaghara anyị na n'ógbè ndị gbara ya gburugburu. Nke ahụ bụ nnukwu ego na ụlọ akwụkwọ anyị.
A tip ... Cheekwa eesn maka ọzụzụ egwuregwu na TSO mụta + ịmata nke ọma.
N'ime usoro ọzụzụ ahụ, e mesiri ike ilekọta ndị ọzọ na-eme egwuregwu. Anyị ga-akụziri gị egwuregwu; Ị maara iwu na ị nwere ike ịmegharị ndị na-eme egwuregwu. Egwuregwu nke gị onwe gị na-akwado ndị ọzọ.
N'okwu niile, ị ga-enweta otu okwu ahụ dịka ihe a na-akụzi na ọzụzụ oge niile site na afọ 3 ruo na gụnyere 7e afọ. Ị ga-enwetakwa usoro Bekee.
Ọzụzụ onye nhazi egwuregwu na-ewe na nkezi abụọ ruo afọ atọ.
Ọ bụ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke pụtara na ị nwere ike ịbanye n'oge ọ bụla n'afọ ma ị ga-agụsị akwụkwọ nanị na 30 June.
Na akwụkwọ nke onye nhazi egwuregwu ị nwere ike ịmalite site na obodo na ndị isi nke ihe eji egwu egwuregwu.
Ọzụzụ ahụ bụkwa ezigbo nkwadebe maka otu ọrụ nchekwa.
Ịchọghị ihe ọ bụla pụrụ iche tupu ị mara maka ọzụzụ nkuzi.
Kedu ihe onye nkụzi egwuregwu kwesịrị?
Na mgbakwunye, ị na-eso otu ụbọchị n'izu isi okwu dị ka usoro ọmụmụ nke agụmakwụkwọ. N'ọmụmụ ihe dum ị nwere ike ịlele akara nke abụọ, ogo nke atọ ma ọ bụ ọbụna diploma diploma gị.
Kpọtụrụ anyị site na weebụsaịtị maọbụ site na ekwentị. Ịnwekwara ike ịwụ elu mgbe niile n'oge awa ụlọ akwụkwọ.